उफ ! ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भो : RajdhaniDaily.com
Homeबिचारउफ ! ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भो
अहिले नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दल र नेतागणका लागि लोकतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो भएको छ । दलका शीर्ष भनिने नेतागण देशका विकास र सुशासनको तगारो बनिरहेका छन् । राजनीतिको नेतृत्वमा पुगेर देशलाई दोहन गरिरहेका छन् । सत्ता र भत्ता टिकाउन अनेक प्रकारका अस्वाभाविक काम गरिरहेका छन् । कोही कार्यकर्ता भएर नेताको हनुमान दास भएका छन् । आप्mना दलका नेताले देश र नागरिकका हितविपरीत गरिने काममा ताली बजाइरहेका छन् । देशको राजनीति अत्यन्त कमजोर र अनैतिक स्तरमा झरेकाले देशका अन्य क्षेत्र पनि कमजोर भएका छन् । हरेक क्षेत्रमा व्यक्ति एवं व्यक्तित्वले आप्mनो ठाउँबाट इमानदार भएर काम गर्न सकेको अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, उद्योग, व्यापार, निर्माण व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा तमाम समस्या छन् । अनियमिता छन् ।
प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भएर पनि देश र जनताका लागि काम गर्ने राज नेता भएन । असल चरित्रका राजनीतिक दल भएनन् । फलतः जतिसुकै परिवर्तन भए पनि संसदीय प्रणालीको चरम दुरुपयोग भयो । अनेक राजनीतिक उतारचढाव र जनआन्दोलनले गरेको राजनीतिक परिवर्तनबाट निर्माण भएको नेपालको संविधान २०७२ पश्चात् जननिर्वाचित सरकारले पनि राम्रो काम गर्न सकेन । जनताका लागि विकास, समृद्धि र सुशासनको आशा ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भएको छ । मुलुक घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटार भनेझैं राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिँदै छ ।
नेपालमा शैक्षिक चेतनाको अभाव छ । जनता सामान्य राजनीतिक जागरणले प्रशिक्षित छन् । देशको ठूलोे जनसंख्याले राजनीतिमा भन्ने गरिएको पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद वा जनवादजस्ता कुनै पनि सैद्घान्तिक अध्ययनको आधारमा दललाई भोट दिने गरेको पाइँदैन । केवल दलका भाषण, प्रचारप्रसार, लोभ, लालच, प्रभाव, पैसा वा अनेक लहडका आधारमा मतदान गरेको पाइन्छ । हरेक दलमा आपराधिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई पनि जिताइएको छ । राजनीतिमा जाल, झेल, धनखर्च, बेइमानीजस्ता क्रियाकलाप हावी छन् । त्यसो त हरेक राजनीतिक दलका सबै नेतागणलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । राजनीतिक क्षेत्रमा असल चरित्रका सक्षम व्यक्ति पनि छन् । तथापि उनीहरूले क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । पाएकाहरू पनि राजनीतिक दुष्कर्मका मतियार भएका छन् । यसरी हेर्दा पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि एउटा दलबाट चुनाव जित्ने र अर्को दलमा प्रवेश गरी मन्त्री बन्ने र सिद्धान्त र आदर्शका ठूलाठूला भाषण गर्नेहरू नै राजनीतिक कुपात्र हुन् । भ्रष्ट हुन् । स्वार्थी हुन् ।
अहिलेको नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा गरेका नागरिकका लागि विकास र सुशासन ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भयो
हाम्रो देशको इतिहास गौरवशाली छ । संस्कृति, सभ्यता एवं प्राकृतिक स्रोत र साधन सम्भवः विश्व जगत्मा विकसित भएका देशको तुलनामा पर्याप्त छन् यो देशमा । राज्य छ, जनता छन् । सिमाना छ, स्वतन्त्र छ मुलुक । संसारका १० वटा अग्ला हिमालमध्ये आठवटा यही देशमा छन् । पूर्वीय दर्शनको अथाह ज्ञान छ । हरेक पहाडको फेदीमा एउटा नदी बगेको छ । जडिबुटीको संग्राहलय छ । भौगोलिक विविधता छ । हिमाल, पहाड र तराईको नमुना उर्वर भूमि छ । धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको जति बयान गरे पनि सकिँदैन । प्रकृतिको गर्भमा सुन, चाँदी, हीरा, मोती, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका विश्वकै महँगो पदार्थ युरेनियमजस्ता खानी छन् । वनजंगल छ । के छैन यहाँ ? छैन त केवल सक्षम नेतृत्व छैन ।
प्रजातन्त्रको ३१ वर्षको राजनीतिक यात्रामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझैं देशलाई विकासको बाटोमा हिँडाउन सक्ने कुनै पनि नेता विशेष वा विश्वासयोग्य राजनीतिक दल नभएपछि कार्यकर्ताबाहेकका भोट दिने नागरिकमा निराश भएका छन् । तथापि शिक्षाको चेतना अत्यन्त कमजोर भएको हाम्रोजस्तो देशका मतदाताले फेरि अर्को निर्वाचनको समयमा योग्य उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् भन्ने छैन । विश्व प्रख्यात दार्शनिक विवेकानन्दले सही समयमा उचित निर्णय गर्न सक्ने व्यक्ति नै सफल व्यक्ति हो भनेका छन् । सफल व्यक्तिका लागि ठीक निर्णयका आधारमा समयको सदुपयोग गर्नु नै सफलताको शिखर चुम्ने भ¥याङ हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा उल्लिेखित भनाइ न त नेतृत्व पंक्तिमा लागू हुन्छ, न त आममतदातामा नै ।
अहिले राजनीतिक विसंगति केन्द्रदेखि प्रान्तीय सरकार हुँदै स्थानीयतहसम्म छताछुल्ल भएको छ । नागरिकका समस्यालाई निदान गर्ने र राहतको महसुस हुने केही पनि कार्य गर्न सक्ने राजनीतिक दल वा नेता विशेष नपाउँदा जनता हैरान भएका छन् । शक्ति र सत्तामा भएका नेतागणले देशलाई कमजोर बनाउने र नागरिकको राष्ट्रिय भावनामा चोट पु¥याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सरकार फेरबदल गर्ने अभ्यासमा लागिरहेका छन् । आपसी खिचातानी र वैरभावले गर्दा पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार लर्खराएको छ । अझै पनि राजनीतिक दल आआप्mनै स्वार्थमा तल्लीन छन् । हाम्रो देशका राजनीतिकदल नै यो देशलाई अस्थिर, गरिब र समस्या नै समस्याको भूमरीमा धकेल्ने एजेन्ट हुन् ।
राजनीतिक दुष्कर्मबाट हैरान भएका नागरिकले संविधान निर्माण पछाडि भएको आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । झन्डै दुई तिहाइको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले देशमा हुने गरेको कालोबजारी, ठगी, कमिसनतन्त्र, महँगी, दण्डहीनता, विभेदलगायतका समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने आशा गरेका थिए । जसरी नेल्सन मण्डलाले दक्षिण अफ्रिकालाई गरिबी, अभाव र औपनिवेशबाट स्वतन्त्रता र समृद्घिको मार्गमा रूपान्तरण गर्न सफल भए । यस्तै हाम्रो देशमा पनि उदाहरणीय काम गर्न सक्ने राजनेताको पर्खाइमा थिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जननिर्वाचित बहुमतको सरकार जनताका लागि माछोमाछो भ्यागुतो भयो । खड्गप्रसाद ओलीलाई सत्ताको मात लाग्यो । अरू जिम्मेवार नेताहरूलाई बदलाको भावनाले लघारी रह्यो । भ्रष्टचारीहरू रमाउन पाए । जनता हिस्स बुढी किच्च दाँतको अवस्थामा सुस्केरा हाल्न बाध्य भए ।
राजनीतिकर्मीबाट जनतालाई ढाँट्ने र देशको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भयो
अत्यन्त कमजोर प्रशासनिक नेतृत्वका कारण विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारका काम गर्ने मन्त्रालयबीचमा समन्वय गरी कार्य गर्ने संस्कृति छैन । ढोके प्रवृत्ति हावी छ । नातावाद र कृपावाद व्याप्त छ । दण्डहीनताले प्रशय पाउँदा मनपरीतन्त्र मौलाएको छ । धिक्कार लोकतन्त्रको मन्त्र जपेर देशको ढुकुटीमा हालीमुहाली गर्ने र ढाका टोपी ढल्काएर सरकारी गाडीमा हुइँकिने सर्वहारा पार्टीका नेतालाई लोकलाज हुँदैन रहेछ हगि ? कि बालुवाटार र सिंहदरबारबाट जनताका कुनै पनि समस्या देखिँदैनन् ? ती ठाउँहरूमा अलिकति पनि नैतिकता छैन ? सिंगापुरका राष्ट्रनिर्माता लिक्वानयुले आफ्नै सहकर्मीमित्रले भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई जेलमा हालेर भनेका थिए, उनलाई आप्mनो एउटा मित्रभन्दा देशका जनता र विकास प्यारो छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टलाई कुखराले चल्ला च्यापेजस्तै च्याप्छन् र भन्छन्, ‘भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता’ । यस्ता कथनी र करणी उल्टो भएका अविवेकी नेताबाट केको आशा गर्नु ?
साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भनेझंै राजनीतिक पार्टीहरूको आपसी खिचातानी र असहिष्णु व्यवहारले नागरिकले लामो समयदेखि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । कुर्सीको राजनीतिले दलहरूप्रति नाक खुम्च्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही समूह र व्यक्ति विशेषले देश निर्माणमा कुनै योगदानबिना नै राज्यको शक्ति र स्रोतमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । नागरिकहरूको मिहेनत र पसिनाबाट उठेको करमा रजाइँ गरिरहेका छन् । अचानोको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भनेझंै नागरिकका दुःख, पिडा र सास्ती सत्ता र भत्तामा रमाएकालाई के थाहा ?
नेतृत्वमा, देशभक्तिको भावना नहुनु, देशलाई बदल्न सक्ने क्षमता र देशलाई ठिक दिशामा सञ्चालन गर्ने भिजन र कार्यशैलीको अभाव हुनु नै देशको दुर्भाग्य हो । देश विकास गर्नका लागि राज्यका हरेक संयन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनु आवश्यक हुन्छ । देश बदल्न नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक आचरण चाहिन्छ । सबैलाई मिलाउन सक्ने ठूलो मन चाहिन्छ । देश विकास गर्ने योजना चाहिन्छ । सामाजिक सुशासन कायम गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवहार चाहिन्छ । विधिको शासन कायम गर्ने क्षमता चाहिन्छ । नेतृत्व तहमा उल्लेखित राजकीय गुणको अभाव भएकाले अहिलेको नेतृत्वबाट ठूलो अपेक्षा गरेका नागरिकका लागि विकास र सुशासनको अपेक्षा ‘माछोमाछो भ्यागुतो’ भयो । राजनीतिकर्मीबाट जनतालाई ढाट्ने र छल्ने काम भयो । देशको भविष्यमाथि खेलबाड गरियो ।
विद्यालयमा अध्ययनरत सवै बालबालिकालाई पोशाक
सप्तरी, राजविराज । बालबालिकालाई विद्यालय सम्म पहुच पुर्याउन, नियमित विद्यालय आउन प्रोत्साहन गर्न तथा शिक्षा तर्फ आर्कषित गराउने उद्देश्यले जिल्लाकै पुरानो मध्येका एक सप्तरी...